I-china ngokwezifiso izikhwama ze-duffle zabesifazane Abakhiqizi, abahlinzeki, ifektri - i-Quotation - iDongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Isikhwama se-Duffle Isikhwama se-Duffle > Izikhwama ze-Duffle zabesifazane
1. KULUNGILE yini ukuthatha isikhwama se-duffel ngaphezu kwesikhwama sowesifazane endizeni?
Izindiza zasekhaya: abagibeli abaphethe amathikithi ekilasi lokuqala bavunyelwe izingcezu ezimbili zemithwalo kumuntu ngamunye, abagibeli abaphethe isigaba sebhizinisi namathikithi ezomnotho bavunyelwe ucezu olulodwa lwemithwalo yomuntu ngamunye. Umthamo wengxenye ngayinye yomthwalo awungeqi 20 × 40 × 55 cm. Isisindo esiphelele salezi zinto ezimbili ezingenhla asidluli ku-5 kg. Indiza yamazwe omhlaba: isiqeshana ngasinye somthwalo asidluli u-20 × 40 × 55 cm, isisindo esiphelele semithwalo yesandla asidluli ku-7 kg. Ngokujwayelekile, kudingeka ihlolwe.
2.Ladies Duffle Bag Parameters (Imininingwane)
Indwangu yobufakazi bamanzi e-Oxford
Indwangu engu-210 d Oxford
Eminye imibala ingenziwa ngezifiso
Usayizi ungenziwa ngezifiso ngokusho kwesicelo
Umkhiqizo owodwa ungene esikhwameni sepulasitiki se-PE, u-10 ebhokisini ngalinye
Ukupakisha kungenziwa yakhelwe ngokuvumelana nezimfuneko
Ukuzikhethela kwamahhala ukuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye
3. Unjani umbala omuhle wepotimende?
(1) Okumnyama ukumelana nokungcola futhi kulula ukufana nezingubo, ngakho-ke sekuwumbala wokukhetha wemithwalo.
(2) Eqinisweni, okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, okumpunga okumnyama kungaba. Umbala onsundu awubi, futhi.Umnyango wombala wokukhanya nawo kufanele usetshenziswe ngokuqapha, omunye awumelani nokungcola, kanti omunye awulungeli kakhulu amadoda.
(3) Mnyama noma nsundu, ibhokisi lokudonsa ngokuvamile alisiwo umbala, ikakhulukazi onsundu futhi omnyama ngaphezulu futhi owesilisa.
Lokhu ikakhulukazi kuncike ekuthandweni komuntu uqobo.Ngokujwayelekile umnyama omnyama, umoya ohlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu, ubonakala uvuthiwe kancane, upinki ubonakala emncane, ethenda kancane.
4. Ayini amakhono wokukhetha amapotimende?
ï¼ˆ1ï¼ ‰ ingaphezulu: liyisicaba, libushelelezi, alinawo umthungo wedizayini, alikho ukubhuza, alikho imiphetho emibi edaluliwe.
ï¼ˆ2ï¼ ‰ngaphakathi: noma ngabe ukukhethwa kwezindwangu noma imikhiqizo yesikhumba, umbala kufanele uqondaniswe nomphezulu.Ulayini wokuthungwa ngaphezulu, ukuthungwa kufanele kube kuhle, akufanele kube kukhulu kakhulu.
ï¼ˆ3ï¼ ‰i-strap: ingxenye ebalulekile yesikhwama, kepha futhi isengozini yokulimala.Bheka ukuthi ngabe kukhona ama-sutures nemifantu ezintanjeni, nokuthi ukuxhumana phakathi kwemichilo yangemuva yomzimba nomzimba wephakeji kuqinile.Zonke izinhlobo zezikhwama kufanele zinake intambo, nomndeni wesikhwama uzobheka kakhulu ukuthwala nokuqina kwebhande, unake ngokukhethekile ukukhethwa.
4ï¼ ‰i-Hardware: njengokuhlobisa kwangaphandle kwephakeji, kunendima yokuqedela ukuthinta.Uma ukhetha isikhwama, ukwakheka kwehadiwe, ukwenza umsebenzi wezandla kufanele unake kakhulu, uma i-hardware yethulwe i-aureate, kufanele ifune iseluleko sokuthi ingaphela kalula Njengamabhokisi enduku yokudonsa, amabhokisi ezimonyo nezinye izikhwama ezinezibambo, kufanele sinake.
5ï¼ ‰Umucu: noma ngabe isikhwama sithungwe ngentambo ecacile noma ngentambo emnyama, ubude bonyawo lwenaliti kufanele bufane, futhi kungabi khona ntambo eveziwe. Qaphela ukuthi awukho yini umbimbi ekuthungeni, ukuthi intambo ihambile yini, bese ubona ukuthi indawo yekhanda lezintambo izodala ukuqhekeka kwesikhwama.
ï¼ˆ6ï¼ ‰i-glue: lapho ukhetha iphakethe, qiniseka ukuthi uhudula izingxenye, ubone ukuthi i-glue inamandla yini.Ngokukodwa ezinye izikhwama ezifake imfashini, ngoba isitayela sihle, umhlobiso muhle kakhulu, ngakho-ke uzoheha iso, kepha uma umhlobiso awuqinile kakhulu, uzolahlekelwa izici zawo.
ï¼ˆ7ï¼ ‰donsa: hlola ukuthi ngabe umugqa ozungeze okuqinile, nejoyini lephakeji kungokwemvelo, ikakhulukazi ezinye izikhwama zokhiye, izikhwama zokwenza izimonyo nokunye kuzogcina izinto ezinzima kakhulu esikhwameni, kufanele kunakwe kakhulu.
ï¼ˆ8ï¼ ‰izinkinobho: yize kuyisisekeli esingabalulekile, uma kuqhathaniswa ne-zip, kulula futhi ukufaka esikhundleni sayo, ngakho-ke kufanele unake kakhulu ukukhethwa.Kwezikhwama ezivuleka futhi zivale njalo, njengamakesi we-CD nezikhwama zemali, ukusebenza kwe Ukubamba kufanele kubhekelwe.
Yimuphi umbala olungele ipotimende? Eqinisweni, umbala wepotimende kakhulu. Imibala ehlukene inemiphumela ehlukile yokubuka, futhi imibala ehlukile ifanelekile ukusetshenziswa kwesixuku.Kodwa ngesikhathi sokuthenga ukuqonda okwengeziwe ngamakhono wokukhetha imithwalo yilokho, ukuze ukuthengwa kwemithwalo kube lula kakhulu, kepha futhi nokuningi uyakwazi ukukhetha ipotimende elihle.
5. Imboni shot real display
5. Ukupakisha ubhaka nokuhamba kwabafundi besikole esiphakathi
(2) Usayizi wokupakisha ozenzakalelayo owodwa: 0.045cm X42cm X 48cm, singakwazi ukwenza ngokwezifiso usayizi wokupakisha ngokwezidingo zakho, ukuze sikulondolozele impahla.
(3) Ukupakisha imininingwane: 59cm X 35m X 46cm. 10PCS / ibhokisi Izinto zekarton: K = K 5 izingqimba zephepha elijiyile lukathayela.
(4) Isisindo esikhulu seFCL: 9.2KG.
(5) isisindo senetha se-FCL: 8KG.
(7) Singaklama indlela yokupakisha yokonga imithwalo eminingi, kepha lokhu kuzodela ezinye izinto, kungadala ukuvela koshintsho lomkhiqizo, ngokuvamile asikhuthazi amakhasimende ukuthi asebenzise le ndlela.
(8) Uma kunesidingo, sizokwakha indlela yokupakisha yalesi sikhwama sabafundi besikole esiphakathi ngokuya ngezidingo zakho.
(9) Uma udinga isampula yalesi ubhaka wesikole esiphakathi, sizokhetha ukukuthumela kuwe ngendiza.
(1) Sizolawula ngokuqinile ikhwalithi yemikhiqizo futhi siyilethe kuwe nge-100% isilinganiso esifanelekile.
(2) Sizokwenza konke okusemandleni ukusindisa izindleko zakho.
(3) Ibhokisi leposi lebhizinisi lethu lisebenza unomphela, futhi ngabasebenzi abangochwepheshe bamakhasimende, ungabhalela ukubonisana nokukhononda nganoma yisiphi isikhathi.Sizofunda futhi siphendule kahle nangokucophelela.
(4) Ngemuva kokuthengiswa kwamasampuli. Uma inguqulo yokuqala idinga ukuguqulwa, sizoguqula amasampula ngokuya ngemininingwane yokuguqulwa. Yonke inqubo yokukhiqiza inguqulo yesibili yamasampuli ayikhokhelwa ngokuphelele.
(5) Sizokwazisa ngenqubekela phambili yokukhiqizwa kwemikhiqizo yoku-oda ngesikhathi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ukuze wazi isimo se-oda ngokushesha okukhulu.
Sizoxhumana njalo amahora angama-24 ngosuku.Sizoxhumana ngempumelelo ukuqinisekisa ukuxhumana kwemininingwane ngokushelelayo.
Q1:Ingabe uyimboni noma ungumhwebi?
Q2:Yimiphi imigomo yakho yokukhokha?
Q3. Siyini isikhathi sakho sokuhola sokukhiqiza ngobuningi ezinsukwini?
Q4. Zingaki izinsuku isikhathi phambili isampula yakho? Ingabe ukunikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma extra?
Q5. Kuzokuthatha isikhathi esingakanani ukuxhumana nokuphendula?
I-Q6:Uhlobo luni lwekhotheshini owamukelayoIzinsuku ezingaki isikhathi sokukhokhwa?
I-Q8: Uyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu? Ungahlinzeka ngombiko wokuhlolwa komkhiqizo? Kuthiwani ngekhwalithi yokukhiqizwa kwakho?
A: Yebo, siyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu.
(3) Singumkhiqizi womkhiqizo wezikhwama zesikole zeDisney, izikhwama zeWal-Mart kanye neSamsonite. Sicela uqiniseke ngekhwalithi yemikhiqizo yethu.
Q9: Uyini umthamo wakho wokukhiqiza ngobuningi?
I-Q10: Ingabe unayo i-oda elincane?
Amathegi ashisayo: Izikhwama ze-duffle zabesifazane, i-China, abenzi, abahlinzeki, ifektri, okwenziwe ngokwezifiso, intengo, ikhotheshini, kusitoko